Kupeta fenicha yekushongedza diki mabhakoni | Bezzia
Maria vazquez | 07/01/2022 18:00 | Tricks kushongedza
Munguva yekuvharirwa, avo vedu vaigona kunakidzwa nenzvimbo yekunze mumba medu takanzwa rombo rakanaka. Even the mavharanda madiki chaizvo vakava pfuma duku. Uye ndizvozvo folding furniture Izvi zvinogona kuva kuwedzera kweimba.
Mavharanda edzimba Kazhinji idiki asi izvo hazvisi chipingamupinyi chekudzishandisa. Unogona kuzvifungidzira uri mune izvi uchinwa kofi mangwanani muchirimo here? Kugara manheru tichiverenga? Kufarira kudya kwemanheru nemumwe wako? Iwe unogona kuita kuti zviitike nekuisa zvidimbu zvishoma zvefenicha.
2 Yakakosha fenicha
3 Vabatanidze pamwe ...
Folding fenicha inzira yakanaka yekushongedza mabhakoni madiki. Izvi hazvisi chete, kazhinji, chiedza, asiwo zvinotibvumira gadzirisa nzvimbo zviri nyore pazvinenge zvakakodzera. Zvakapetwa zvinotora nzvimbo shoma shoma, izvo zvinokutendera kushandisa nzvimbo neimwe nzira. Asi aya haasi iwo ega mabhenefiti emhando iyi fenicha sezvaunogona kuwana pazasi.
Iwo fenicha yakareruka; zvinorema zvishoma uye zvinoonekwa zvinotora nzvimbo shoma.
Inogona kupetwa uye kuunganidzwa zviri nyore patinenge tichida kushandisa nzvimbo yacho neimwe nzira kana kungoigadzirira nguva yechando.
Ndeipi fenicha yekupeta yakakosha pavharanda? Zvinodiwa zvemunhu wega wega kana mhuri yega yega zvakasiyana, asi kune zvidimbu zviviri zvefenicha zvisingawanzo pinda munzira yevharanda sezvo vachiigadzira nzvimbo inoshanda. Tinotaura chokwadi nezvazvo matafura nezvigaro.
Una tafura yekupeta yakatenderera ndeyekuwedzerwa kunogamuchirwa nguva dzose. Uye… zvingaite pfungwa yei kuisa tafura isina kana macheya maviri akaitenderedza? Seti yerudzi urwu ichakubvumidza iwe kuita akawanda zviitiko kunze kwenyika: kunwa kofi, kudya, kuverenga, kushanda ... uye kuzviita nemumwe munhu.
Une nzvimbo shoma shoma here? Bet pa a semicircular table kuti iwe unogona kubatanidza kune railing kana kumadziro uye kutsiva macheya nebhenji padivi pebhakoni. Iwe haugone kukwana macheya maviri asi bhenji rinogona kutakura vanhu vaviri. Unogona here kuisa tafura ine rectangular? Kana nzvimbo iri pamhanza yako ichibvumira uye kukwanisa kudya nekudya kunze kuri pamberi pako, usazeza!
Bet patafura uye zvigaro zvakagadzirwa nezvinhu zvakakodzera nzvimbo dzekunze. Zvinhu zvinotsigira zvakanaka Mamiriro okunze asina kunaka sesimbi, mafibhi ekugadzira kana matanda anopisa se teak.
Vabatanidze pamwe ...
Un workbench kana kuregererwa nekuchengetedza havambonyanyi kuwanda pabalcony. Pamabhenji unogona kugara vanhu vakawanda kupfuura zvaungagona mumacheya anogara panzvimbo yakafanana neiyi. Kana ukaisungirira kumadziro uye woisa mamwe mateti iwe unogona zvakare kuzorora chero nguva yezuva.
Chinonyanya kukosha kuva nenzvimbo yekuvata pasi uye kuzorora here? Ipapo iwe unogona kusarudza kuisa sofa uye kukanganwa nezvetafura uye zvigaro kana iwe usina nzvimbo ye tofo. Bet pakona sofa uye zadzisa iyo seti nayo tafura yekofi inopeta. Ichakushandira iwe kuva nekofi kana kushumira chiedza chekudya kwemanheru.
Iwe unoda kuita kuti nzvimbo yacho ive inogamuchirwa? Kana iwe usingade pasi pebharukoni rako kana kuti iri muhurombo, wadii kuisa a patterned platform? Iwo ari nyore kwazvo kuisa; kungotinya zvishoma. Uye kana balcony yako iri diki kwazvo, mutengo hausi kukwira. Iwo ari mutengo pakati pe € 16 uye € 23 pa square mita. Zvakare machira anokubatsira nekudziya.
Uye usakanganwa sanganisira zvimwe zvirimwa. Izvi zvinounza kutsva uye ruvara kune balcony. Uye, zvinoenderana nekuti ndezvipi zvinomera zvaunosarudza uye kwaunozviisa, zvinogona kukupa iwe kuvanzika kukuru. Bet pazviyereso zvekuchengetedza zvishoma zvinogona kugara kunze kwegore rose uye zvisina mapapiro akakura kuitira kuti zvisabe nzvimbo yakawandisa.
Kushongedza mabhakoni madiki nekupeta fenicha iri nyore uye isingadhure. Tarisa zvimwe uye gadzirira balcony yako chitubu chisati chasvika kuti utange kutora mukana wacho nekukurumidza sezvinobvira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Tricks kushongedza » Kupeta fenicha yekushongedza mabhakoni madiki
4 mishonga yepanyama yekurapa misoro